✨🍑Easy! HIP TRAINER - 39,000MMK NOW 🍑✨ | Beauty & Wellness Online Shop in Myanmar(Burma)- FDA Approved Items Only | Drecome Beauty
✨🍑Easy! HIP TRAINER - 39,000MMK NOW 🍑✨ - Beauty & Wellness Online shop in Myanmar | Drecome Beauty
👉 HIP TRAINER - Kegel Exercise Device
👉လေ့ကျင့်ခန်းအခြေခံလမ်းညွှန် (Kegel Exercise Device)
39,000MMK click >> ORDER NOW
၁.လေ့ကျင့်ခန်းကိရိယာကို ပေါင်ရင်းတွင် ထည့်ပြီး ညှပ်ထားပါ။
၂.ခြေဖနောင့် နှစ်ဘက်ကိုထိပြီး ခြေမနှစ်ချောင်း ကို ၄၀ံခွာရပ်ပါ။ ( V ပုံသဏာန် )
၃. လေ့ကျင့်ခန်းကိရိယာ၏ တောင်ပံပိုင်းကို တင်ပဆုံနှင့် ပိုနီးကပ်သွားစေရန် အရှေ့သို့ဆွဲပါ။
၄.ပေါင်အတွင်းဘက် ကြွက်သားကို အသုံးပြုပြီး လေ့ကျင့်ခန်း ကိရိယာကို ညှစ်ပါ။
၅. KEDကို ညှစ်သောအချိန်တွင် အသက်ကို ခပ်ပြင်းပြင်းမျှင်းကာ ၅ စက္ကန့်ခန့် ရှုသွင်းကာ တပြိုင်နက်တည်းကရိယာကို ဆွဲညှစ်ပါ။
ထို့နောက် လေကို ဖြည်းဖြည်းချင်းရှုထုတ်ပြီး ကိရိယာညှစ်ခြင်းကို ဖြေလျော့ပါ။
ပက်လက်အနေအထားဖြင့် ဖြစ်စေ၊ ဒိုက်ထိုးသည့်အနေအထားဖြင့်ဖြစ်စေ အထက်ပါ လေ့ကျင့်ခန်းကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
ဒူးထောက်ပြီး ထိုင်ထ လုပ်နေစဉ်တွင်လည်း ထိုလေ့ကျင့်ခန်းအား လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
*စအိုကြွက်သားများ သန်မာလာစေနိုင်သောကြောင့် ၀မ်းကိုကောင်းစွာ ထိန်းနိုင်ခြင်း၊
*ဆီးမထိန်းနိုင်ခြင်း ပြသာနာကို ခံစားနေရသော ကျား မ မရွေး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဖြင့် သက်သာလာစေနိုင်ခြင်း၊
*အမျိုးသမီးမွေးလမ်းကြောင်း ကြွက်သားများ သန်မာလာစေရန် အထောက်အကူပြု ပေးနိုင်ခြင်း၊
*ဗိုက်ကြွက်သား ပေါင်ကြွက်သား တင်ပဆုံကြွက်သားများ တောင့်တင်းလှပလာစေခြင်; တို့ကြောင့် ကျား မ မရွေးတနေ့ကို ၁ မိနစ်ခန့် အချိန်ပေး လေ့ကျင့်ကစားနိုင်ပါသည်။
KED ပြန်ကန်အား မိမိနှင့် ကိုက်ညီစေရန် ဘီးစိတ်ကလေးအား
အပေါ် (သို့) အောက် သို့ တွန်းရွှေ့ပေးပါ။
လေ့ကျင့်ခန်း ကရိယာကို အားမြှင့်ချင်ပါက
အတိုးအလျော့ ဘီး အား အပေါ်သို့ ရွှေ့ပါ။
လေ့ကျင့်ခန်း ကရိယာ၏ အားလျှော့ချင်ပါက
အတိုးအလျော့ ဘီးကို အောက်သို့ ရွှေ့ပါ။
(Warranty6Months)
Do you often get upset about hip dropping and fat thigh? Do you haveagreat desire to have tight buttocks and thin thigh? Now let’s try pelvic floor strengthening device, it’s an effective way to beautify buttocks and recover postpartum weakened pelvic muscles
Basic Pelvic Muscle Hip Training
Open your tiptoes at 40 degree, and stand with heels closed
Place and adjust kegel exerciser between your upper thighs, the narrow end faces forward
Squeeze kegel exerciser with your upper thigh and buttock muscles
Clamp and clench your muscles as tightly as you for 5s, then relax, this action cycles 8 times
Intermediate Pelvic Muscle Hip Training
Keep kneeling on the training mat
Stretch your hips up, squeeze kegel exerciser with inner thigh and buttock muscles
Advanced Pelvic Muscle Hip Training
Starting from push-ups down, place and adjust kegel exerciser between your upper thigh, the narrow end faces forward
Raise your body and keep the upper body parallel to the floor, let the pelvis lean back and lift the belly,
Squeeze kegel exerciser tightly and breathe naturally for 60 seconds
Show Your Sexy Hip and Charming Figure
When using the super kegel exerciser, your pelvis and hip muscles all participate in the exercise, which helps beautify buttocks and thigh. You must be more charming and confident with tight hip and thin thigh.
ဒုတိယမျက်နှာ ဖြစ်တဲ့ဆံကေသာကို သင့်ရွေးချယ်မှုနဲ့ အလှဆင်ပါ
✨🍑Easy! HIP TRAINER - 39,000MMK NOW 🍑✨
.နှင်းဆီသလင်းကျောက် Rose Quartz ဟာ သင့်ကို လှပစေနိုင်ပါတယ်
အိမ်မှာနေရင်း 🌺SPA လုပ်ဖို့ဆို ✨
နေ့စဉ်အသုံးပြုပေးခြင်းဖြင့် သင့်ရဲ့ မျက်နှာလေးကို ပြောင်းလဲလိုက်ပါ
CATEGORY OF PRODUCT
PRIVACY/TERMS & CONDITION
© Drecome All Rights Reserved
ကားရပ္ထားရန္ေနရာ အင္တာနက္သံုးစဲြခြင့္ ေလေအးေပးစက္
မ်က္ႏွာ ကိုယ္ခႏၶာ ဆံပင္ လက္သည္း ကျန်းမာရေး
မ်က္ႏွာသစ္ျခင္း မ်က္ႏွာသန္႕စင္ျခင္း မ်က္ႏွာလိမ္းေဆး မ်က္ႏွာလိမ္းႏို႕ရည္ မ်က္ႏွာအဆိပ္ေျဖျခင္း မ်က္ႏွာေပါင္းတင္Mask မ်က္ႏွာေပါင္းတင္ ကပ္ခြာ မိတ္ကပ္ေအာက္ခံ၊ Concealer မိတ္ကပ္Foundation ေနေလာင္ဒဏ္ကာကြယ္ျခင္း Eye Liner မ်က္ခံုး မ်က္ခြံ မ်က္ေတာင္ေကာ့ေဆး ႏႈတ္ခမ္း ပါး မ်က္ေတာင္ အျခား face cream toner emulsion face oil
Oily Dry Combination Acne Sensitive Anti Aging
ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ ဆံပင္ေပ်ာ့ေဆး ဆံပင္ေပါင္းတင္ျခင္း ဆံပင္လိမ္းဆီ ဆံပင္အေျခာက္ခံျခင္း ဆံပင္လိမ္းခရင္မ္ ဆံပင္ပံုသြင္းျခင္း ဆံပင္ေျဖာင့္ျခင္း အျခား
Oily Dry Dandruff Anti Aging Damage Color Damage Straight Volume
ကိုယ္လိမ္းခရင္မ္ ကိုယ္တိုက္ဆပ္ျပာ ခႏၶာကိုယ္ေခ်းခၽြတ္ျခင္း ေနေလာင္ဒဏ္ကာကြယ္ျခင္း ေျခေထာက္သန္႕စင္ျခင္း အော်ားအာမင္ကၽတျ္ကင်ား္ အျခား hand cream
လက္သည္းအလွျပင္ျခင္း/လက္သည္းဆိုးျခင္း ေျခေထာက္အလွျပင္ျခင္း/ေျခသည္းဆိုးျခင္း Nail Gel Top Coat Nail Decoration လက္သည္းေျခသည္း သန္႕စင္ျခင္း အျခား
Wellness Tumbler Supplement Wear Equipment Woman Health Perfume Massage eyedrop Tea